Submitted by everlearner on Sat, 12/22/2012 - 06:10
If you areaDrupal developer oraDrupal site administrator, how many of you are tiring with fighting spam comments and spam accounts in your Drupal sites?
What modules are you using to solve these problems?
For me, I was facing so many spam problems for mmshare.org, myanmarlanguage.org and some other Drupal sites, about two years. I used Captcha module with Maths captcha, but spam robots know how to by pass the challenges :D
Read more about Fighting Spam Accounts and Spam Comments with Combination of Captcha and Botcha
Submitted by NWAung on Sat, 10/27/2012 - 06:46
Website တွေရဲ့ထိပ်မှာ Ad Banner တွေ တင်ထားကြတာကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ Mouse hover လုပ်လိုက်ရင် Drop Down လေး ကျလာမှာပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးလေး ကျွန်တော်တို့ Drupal မှာ Tutorial လုပ်ကြည့်ရအောင်။ အရင်ဆုံး ဘာ module ဒေါင်းရမလဲဆိုတော့ ဘာ module မှ မဒေါင်းရဘူးခင်ဗျ :D ။ Module ထည့်စရာ မလိုပါဘူး။ jQuery ကို သုံးမှာ မို့လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ jQurey Plugin လေးက တော့ ...
Read more about How to create an drop-down advertisement banner with jQuery in Drupal
Read more about Top 10 things to do after you install Drupal - Part 2
Read more about Top 10 things to do after you install Drupal
Submitted by NWAung on Fri, 02/10/2012 - 06:49
ဒီ post က Absolute Beginner များကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ရေးထားတာက အသေးစိတ်နေတော့ တစ်ဆင့်ချင်း လိုက်လုပ်ရမှာ မကြိုက်သူတွေက ဒီမှာ ရေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။Drupal7မှာ Beginner တော်တော်များများ Text Editor ထည့်ရတဲ့ အခက်အခဲကို ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ သုံးလည်းသုံးချင်၊ module သွင်းပြန်တော့လည်းမရ၊ ရပြန်တော့လည်း ပုံတင်မရ၊ ပုံတင်လို့ရပြန်တော့လည်း page ပေါ်မှာ ပုံမပေါ်နဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ Text Editor ပြဿနာကြုံဖူးပါတယ်။ ကဲ … စလိုက်ကြစို့။
Read more about Detail of Using Text Editor in Drupal 7